Tykerb (231277-92-2) - Onye na-egbu eriri akpa nwa | AASraw azụta Tykerb
/blog/gallery/Tykerb (231277-92-2) - Onye na-egbu eriri ara
Ihe na 07 / 18 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
I.Lapatinib ntụ ntụ isi agwa:
1.Tykerb Uzuzu uzuzu.
molekụla Formula C29H26CIFN4O4S
molekụla arọ 581.05
Agba White ma ọ bụ na-acha ọcha Crystalline ntụ ntụ
aha ọzọ ọgwụ
2.What bụ Oke?
Ahịa aha Tykerb na Tyverb bụ ọgwụ na-eji ọgwụgwọ agwọ ọrịa kansa na akwara siri ike. Ọ bụ dual tyrosine kinase inhibitor nke na-agbaji HER2 / neu na epidermal ibu na-eme ka onye nata (EGFR) ụzọ. A na-eji ya agwọ ọrịa maka ọrịa HER2-ọma. A na-eji ya maka ọgwụgwọ nke ndị ọrịa nwere ọrịa cancer ara ogologo ma ọ bụ metastatic nke bụ ụbụrụ nke kachasị njọ HER2 (ErbB2) .Mgbe ọtụtụ US, a na - akpọ Tyker na ọtụtụ Europe na Russia a na - akpọ Tyverb.Na January 2010, Tykerb nwetara nkwado maka ọgwụgwọ nke ụmụ nwanyị postmenopausal nwere diamone receptor cancer cancer metastatic ọma. Lapatinib na - egbochi usoro nrịbama ihe nrịba site na - nke ngalaba EGFR / HER2 protein kinase, igbochi onwe-phosphorylation na ntinye ọrụ nke usoro mgbaàmà, Tykerb (mgbasa) bụ ọgwụ cancer na-ejikọta ya na ọgwụ ọzọ a na-akpọ capecitabine (Xeloda) iji na-emeso ụdị ọrịa cancer araba na-agbasa na akụkụ ndị ọzọ nke ahụ, ma na-enyekarị ya mgbe a nwara ọrịa ọgwụ ndị ọzọ na-enweghị ọgwụgwọ nke mgbaàmà
3.How ke Oke -arụ ọrụ?
akwara Ọgwụ ịgwọ ọrịa na-elekwasị anya na igbu ngwa ngwa ịwa mkpụrụ ndụ n'ihi na otu akụkụ nke mkpụrụ ndụ kansa kansa bụ na ha na-ekewa ngwa ngwa. Usoro ọgwụgwọ a na-achọ ịmara njirimara ndị ọzọ ọrịa kansa mkpụrụ ndụ dị iche iche. E nwere ụdị ọgwụgwọ ndị a ezubere iche, akọwapụtara n'ime ụzọ atọ buru ibu. Ụfọdụ usoro ọgwụgwọ a na-elekwasị anya na-elekwasị anya n'ihe ndị dị n'ime na ọrụ nke ọnyá kansa. Usoro ọgwụgwọ a na-atụ anya na-eji obere mkpụrụ ndụ nke nwere ike ịbanye na cell ma mebie ọrụ nke mkpụrụ ndụ, na-eme ka ha nwụọ. E nwere ọtụtụ ụdị ọgwụgwọ a na-elekwasị anya na-elekwasị anya n'ime akụkụ nke sel. Usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ a na-elekwasị anya na-echeta ndị nabatara ndị dị n'èzí cell. A na-akpọkwa ọgwụgwọ ndị na-eleta ndị nabatara dịka ọrịa nje monoclonal. Ndị na - emechi nje Antiangiogenesis na - echekwa arịa ọbara ndị na - enye oxygen na mkpụrụ ndụ ahụ, na - eme ka mkpụrụ ndụ ahụ nwee agụụ.Pertuzumab bụ mgbochi monoclonal nke na - elekwasị anya na mkpụrụ ndụ mmadụ na - eto eto nke na - eme ka 2 protein na -HER2) na cell cancer, na-egbochi HER2 na-eme ka ọnyá kansa na-anwụ. Pertuzumab ejikọtara ebe dị iche iche nke protein HER2 karịa trastuzumab nke mere na mgbe pertuzumab jikọtara ya na trastuzumab, nchịkọta zuru ezu nke HER2 na-egosi na ọ bụ. Hụ na HER2-positive cancer cancer, ndị na-anabata HER2 na-eji nsịn protein, akpọ kinases, ime ka cell ahụ tolite ma kewaa ihe na-adịghị mma. Njiri aka na-achịkwa ume ole mkpụrụ ndụ na-eto ma na-amụba. Mkpụrụ ndụ nke ọrịa ara ehi nke kachasị njọ HER2 nwere ike inwe oke kinase ọrụ, ya mere mkpụrụ ndụ cancer na-etowanye oke, kwa ngwa ngwa .Tykerb na-arụ ọrụ site na itinye aka na kinase HER2 n'ime cell ahụ, na-egbochi ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ ndụ arahụ ọrịa kansa ga-eto na ịmụba . Site n'inwe ike ume, Tykerb nwere ike ịkwụsị ma ọ bụ gbochie uto ọrịa kansa.
4.Will Tykerb arụ ọrụ maka gị?
A pụrụ iji ule dị iche iche dị iche iche mee nchọpụta ma ọ bụrụ na ọrịa kansa bụ HER2-positive ma ọ bụrụ na ọ ga-azaghachi Tykerb:
IHC bụ ule a na-ejikarị emekarị iji hụ ma ụbụrụ nwere ọtụtụ protein protein na HER2 n'elu sel cancer. IHC test na-enye akara nke 0 ka 3 + nke na-egosi ọnụọgụ protein protein HER2. Ọ bụrụ na 0 nọmba tumo na 1 +, a na-akpọ ya "HER2 ọjọọ." Ọ bụrụ na ọ na-agụ 2 + ma ọ bụ 3 +, a na-akpọ ya "HER2 positive." Ụmụ nwanyị ndị nwere IHC dị mma na-emeghachi omume n'ụzọ dị mma Oke. A naghị ele ọgwụ anya dị irè maka etuto ahụ na IHC ọtụtụ 0 ma ọ bụ 1 +.
Nri (Ọkpụkpụ na-eme ka nchịkwa dị iche iche)
Nnwale ugbo a na-ele anya na ọrịa HER2 kpatara. Nnwale a bụ ihe kachasị mma, ma ọ dị obere, ụzọ iji chọpụta ma ọ bụrụ na ara ara nwere ike ịzaghachi Tykerb ..
Na ule FISH, ị ga - enweta akara nke ma ọ bụ "dị mma" ma ọ bụ "ọjọọ" (ụlọ ọgwụ ụfọdụ na - akpọ nyocha efu "efu"). Ọ bụrụ na ọrịa cancer bụ Ụdị nke ọma, ọ ga-abụghachi na Tykerb.
Siri Igwe HER2 IKE
Ọhụụ SpoT-ọkụ HER2 CISH na-achọ HER2 mkpụrụ ndụ ihe nketa na ọrịa kansa ara anụ. Nlereanya SpoT-Light na-eji ntụpọ nke na-eme ka mkpụrụ ndụ HER2 / neu gbanwee ụcha.Enwale SPoT-Light test, ị ga-enweta akara nke ma "mma" ma ọ bụ "ọjọọ." Ọ bụrụ na ọrịa cancer bụ SPoT-Light positive, zaghachi Tykerb.
Kọwapụta HER2 Dual ISH (na nchịkọta ndị ọzọ)
Ihe nyocha nke HER2 Dual ISH na-eji eriri pụrụ iche nke na-eme ka ndị na-edozi HER2 gbanwee agba. A na-etinye ntụpọ ahụ na ihe ntanye anụ ahụ na-egbu anụ ma na-ele anya n'okpuru microscope. Nlere a na-enye ihe kachasị aka karịa nyocha IHC HER. Site nyocha Inform HER2 Dual ISH, ị nweta akara nke "HER2 positive" ma ọ bụ "HER2 ọjọọ."
5.Gịnị bụ mmekọrịta ọgwụ ọjọọ nke Tykerb?
A na-eji usoro imeju enzyme imeju CYP3A4 mee ihe. Ọgwụ ndị na-egbochi ma ọ bụ na-eme ka CYP3A4 nwere ike imetụta ọnyà nke Tykerb n'ime ahụ. Ndị na-emechi ihe na-eme ka ụbara ọbara nke Tykerb na inducers belata ọnụ ọgụgụ ọbara ya. A ghaghị ịtụle mgbanwe dị iche iche nke Tykerb maka ndị ọrịa na-enweta ndị mmegide CYP3A4 siri ike ma ọ bụ ndị na-eme ihe nrịba. Ndị na-esonụ abụghị ndepụta zuru oke nke ndị na-emechi ihe na inducers.Inhibitors: ketoconazole, clarithromycin, atazanavir, nefazodone, nelfinavir (Viracept), telithromycin, na voriconazole.Inducers: dexamethasone, phenytoin, carbamazepine, rifampin, phenobarbital, wort nke St John.
6.Ụdị Egwuregwu Tykerb
Common mmetụta nke Tykerb gụnyere:
ọgbụgba, ikpo ọkụ, afo iwe, ọnụ ọnụ, ọkụ ọkụ, akpụkpọ anụ, ihe mgbu ma ọ bụ ọbara ọbara na ọbụ aka gị ma ọ bụ ụkwụ ụkwụ gị, ntutu isi, nsogbu na mkpịsị aka gị ma ọ bụ mkpịsị ụkwụ gị, na ụra nke ụra.Ọ bụrụ na e nyere Tykerb na Xeloda chemotherapy , ị nwekwara ike ịnweta mmetụta dị na chemotherapy. Karịsịa, Xeloda ejikọtara na neuropathy, ma ọ bụ na-acha uhie uhie na ịkụ aka na aka. Mgbe a na-enye Tykerb na Femara, ị nwekwara ike inwe mmetụta ndị Femara. Mmetụta dị iche iche nke Femara bụ ọnyá ọkpụkpụ na ọkpụkpụ na nkwonkwo mgbu.Tykerb eyighị ka ọ ga-eme ka nsogbu obi na nsogbu dị njọ na Herceptin daa njọ .Ọ bụrụ na ị dị ime ma ọ bụ chee na i nwere ike ime, gwa dọkịta gị. A maghị ma ọ bụrụ na ọgwụ a abanye n'ime mmiri ara ehi. N'ihi ihe ize ndụ nwere ike ime nwatakịrị ahụ, ị ​​na-enye nwa ara mgbe ị na-eji ọgwụ a eme ihe adịghị atụ aro ya.
7.Gịnị bụ ịdọ aka ná ntị na nlekọta maka Tykerb?
Onye ogwu nwere ike imetụta otú obi si awụfu ọbara. Kwenye na ọ bụrụ na ịmalite Tykerb, na-aga n'ihu ịlele usoro ọgwụgwọ.
Tykerb adịghị enwekarị ụfụ imeju. Lelee ọrụ imeju n'ihu ọgwụgwọ na ọ bụla 4-6 izu n'oge ọgwụgwọ.
Onye ozo nwere ike ime afọ ọsịsa. Ọ bụrụ na afọ ọsịsa emee, jikwaa ndị na-egbochi ọrịa diarrheal na nnọchi mmiri.
Tykerb nwere ike ịkpata nsogbu ahụ ọkụ. Debe Tykerb ma ọ bụrụ na ihe mgbaàmà nke a mere.
Tykerb nwere ike ime ka akpụkpọ ahụ dị njọ. Debe Tykerb ma ọ bụrụ na nke a emee.
8.Kedu ụdị ọgwụgwọ nke Tykerb?
A na-enye Tykerb dị ka mbadamba Mbadamba 250. A na-ewere mbadamba ise otu ugboro n'ụbọchị kwa ụbọchị na afo efu maka ụbọchị 21 na ụbọchị 21. Ebibila ma ọ bụ chekwaa mbadamba. Na-echekwa na ụlọ okpomọkụ ma na-etinyechi akpachi. E nyere Tykerb na Xeloda (capecitabine) 2000mg / m2 / ụbọchị a na-eji ọnụ ekwu okwu na 2 nkewa, 12 awa iche maka ụbọchị 14 mbụ nke ọ bụla Nchịkọta ọgwụgwọ 21 ụbọchị. A ghaghị iji nri ma ọ bụ minit 30 mechaa Capecitabine.
Were ọgwụ a kpọmkwem dị ka dọkịta gị si chọọ. Soro ntuziaka ndị dị na labelị ọgwụ gị nke ọma.
Ọgwụ dọkịta gị na-atụ aro nwere ike ịdabere na ndị a:
ogo gị, ogo gị, afọ gị, okike gị
Ngwá ọgwụ nke usoro ọgwụgwọ maka ọrịa cancer ma ọ bụ nke metastatic bụ 1,250 mg (5 tablets) nke ọnụ na-ekwu otu ugboro kwa ụbọchị na 1-21 nke oge. Ngalaba ọgwụgwọ nke ọgwụ na-agwọ ọrịa agwọ ọrịa (HER2-positive) ọrịa cancer bụ 1,500 mg (Mbadamba 6) nyere ọnụ okwu kwa ụbọchị kwa na letrozole.
9.Gịnị bụ -eri nke Tykerb?
Ọnụ Ahịa Dị Ukwuu: $ 30.10 site na Mbadamba 250 mg
Onyinye 21 Day (1 Cycle): $ 3,160.50
10.Gịnị bụ mmekọrịta ọgwụ ọjọọ nke Tykerb?
A na-eji usoro imeju enzyme imeju CYP3A4 mee ihe. Ọgwụ ndị na-egbochi ma ọ bụ na-eme ka CYP3A4 nwere ike imetụta ọnyà nke Tykerb n'ime ahụ. Ndị na-emechi ihe na-eme ka ụbara ọbara nke Tykerb na inducers belata ọnụ ọgụgụ ọbara ya. A ghaghị ịtụle mgbanwe dị iche iche nke Tykerb maka ndị ọrịa na-enweta ike CYP3A4 ndị na-emechi ihe ma ọ bụ ndị na-eme ihe ike. Ndị na-esonụ abụghị ndepụta zuru oke nke ndị na-emechi ihe na ndị na-eme ihe.
Ndị na-emechi: ketoconazole, clarithromycin, atazanavir, nefazodone, nelfinavir (Viracept), telithromycin, na voriconazole.
Ihe nkedo: dexamethasone, phenytoin, carbamazepine, rifampin, phenobarbital, wort nke St John.
11.Gịnị ka m ga - eme?
Ọ bụrụ na ị eluị ga - akpọ dọkịta gị ma ọ bụ ebe nchịkwa nsị, ma ọ bụ gaa n'ụlọ mberede ụlọ ọgwụ kacha nso. Were mbadamba lapatinib na gị mgbe o kwere omume.
12.Where enwere m ike ịnweta ozi ndị ọzọ?
Cheta, chebe ya na ọgwụ ndị ọzọ niile na ụmụ gị agaghị enweta ya, gị na ndị ọzọ na-aṅụ ọgwụ, na-eji ọgwụ a eme ihe maka ihe ngosi ahụ.
Emeela mgbalị ọ bụla iji hụ na ozi AASraw na-eweta kwa ụbọchị, na nke zuru ezu, ma ọ dịghị nkwa e mere maka ya. Ozi ọgwụ ọjọọ nke dị n'ime ebe a nwere ike ịbụ oge nlezianya. Ejikọtara ihe ọmụma gbasara ndị ọkachamara na ahụike na United States. N'ihi ya, AASraw anaghị enye ikike na-eji ya na United States eme ihe kwesịrị ekwesị, ma ọ bụrụ na egosiri ya n'ụzọ ọzọ. AASrawihe ọmụma ọgwụ ọjọọ adịghị akwado ọgwụ ọjọọ, chọpụta ndị ọrịa ma ọ bụ kwadoro ọgwụgwọ. Ozi ọgwụ ọgwụ AASraw bụ ihe ọmụma nke enyere iji nyere ndị na-ahụ maka ịgwọ ọrịa aka na-elekọta ndị ọrịa ha na / ma ọ bụ na-ejere ndị na-azụ ahịa na-ele ọrụ a anya dị ka mgbakwunye na, ọ bụghị ihe mgbakwunye maka, ọkachamara, nkà, ihe ọmụma na ikpe nke ndị dọkịta. Enweghị ịdọ aka ná ntị maka ọgwụ nyere ma ọ bụ ịṅụ ọgwụ ọjọọ n'ụzọ ọ bụla, ekwesịrị igosi na ọgwụ ọgwụ ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ dị mma, dị irè ma ọ bụ kwesịrị ekwesị maka onye ọ bụla e nyere. AASraw anaghị ewere ọrụ ọ bụla maka akụkụ ọ bụla nke nlekọta ahụike nke enyere site na enyemaka nke oziAASraw na-enye. Ihe ọmụma dị n'ime ebe a abụghị iji kpuchie niile ojiji, ntụziaka, nlekọta, ịdọ aka ná ntị, mmekọrịta ọgwụ ọjọọ, mmeghachi ahụ na-adịghị mma, ma ọ bụ mmetụta ọjọọ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara ọgwụ ndị ị na-ewere, chọpụta dọkịta gị, nọọsụ ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ.
Ihe Nkọwa Kasị Kpee Ihe Site na Onye Ndozi JZL-184 (1101854-58-3) Suppliers	Onye na-ahụkarị steroid Mibolerone (Nyochaa tụlee) online